मनोरंजन – Patrika Nepal
पिन्सा राइ नेपालकी चर्चित मोडल हुन् । उनले २०७१ साल देखि व्यवसाय गर्न थालेकी हुन् । व्यवसाय बढाउदै २०७२ साल देखि व्यवसायसँगै मोडलिङ क्षेत्रमापनि सक्रिय बनिन् । उनी २०७३ सालकी मिस मेकअप हुन् । विभिन्न प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदै मोडलिङ क्षेत्रमा अब्बल बनिरहेकी पिन्साले एक टीम बनाएर विभिन्न इभेन्टहरु समेत आयोजना गर्दै आएकी छिन् । २०७५ सालमा उनी सहितको टीमले मिष्टर एण्ड मिस पूर्वको प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । पिन्सा व्यवसायसँगै, मोटिभेशन, अभिनय, व्यूटी पार्लर जस्ता अनेकौ तालिमहरु दिँदै आएकी छिन् । उनी राम्रो ट्रेनरको रुपमा स्थापित हुँदै आएकी छिन् । उनले म्युजिक भिडियोमा अभिनय समेत गरिसकेकी छिन् । उनले छोटा तथा लामा चलचित्रहरुको लेखन समेत गर्छिन् । चलचित्रको कथा लेख्नुका साथै निर्देशनमा समेत आफूलाई अब्बल रुपमा उभ्याउने उनको प्रयास छ । उनले एउटा (काया) शीर्षक को सिरियलको कथावस्त
गायिका समीक्षा अधिकारीले नारीलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिएकी छन्। गायिका अधिकारीले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैले नारीको विश्वास र भावनामा खेलबाड गर्यो भने उसले दुःखद परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएकी हुन्। नारी भनेका दुर्गा देवीका रूपमा माया–ममता पनि दिन पनि सक्ने र अन्याय भएमा महाकाली बनेर पीडकको सर्वनास पनि गर्न सक्ने आक्रोश उनले व्यक्त गरेकी छन्। ‘यदि कसैले नारीलाई कमजोर सोचेर उसको विश्वास र भावनामाथि खेल्यो भने उसले नारीको शक्तिको सामना गर्न सक्दैन, त्यसैले नारीलाई कमजोर नसोच्दा पनि हुन्छ’, उनले लेखेकी छन्, ‘नारी दुर्गाको रूपमा माया ममता दिन सक्छिन् भने परेको खण्डमा महाकालीजस्तो रूप लिएर सर्वनास पनि गर्न सक्छिन्।’ केही समयअगाडिसम्म अभिनेता पल शाहसँग जोडिएर उनका बारेमा विभिन्न खबर सार्वजनिक भए पनि हाल यो क्रम रोकिइसकेको अवस्थामा गायिका समीक्षाले उक्त चेतावनी कसलाई दिएकी हुन्,
बाल गायिका कमला घिमिरेले दोहोरी खेलेर कमाएको पैसाले आफ्नै घर बनाउदै,राजु परियार चकित(भिडियो)
लोकप्रिय बाल गायिका कमला घिमिरेले दोहोरी खेलेरै घर बनाउने तयारि गरेकी छिन्।आफ्नै कमाइबाट उनले घर बनाउन लागेको अन्तरबार्ताबाट खुलेको छ।राजु परियार र कमला घिमिरे संग गरिएको एक बिशेष कुराकानिमा कमलाले आफुले अब घर बनाउन लागेको बताएकी छिन्। सानो उमेरमै करोडौ दर्शकको मन जितेकि कमला अहिले पनि उस्तै चर्चामा रहेकी गायिकाको रुपमा रहेकी छिन।उनको चर्चा देखेर सबै चकित हुन्छन।दुइ बर्षको हाराहारीमा झन्डै ६० लाख बढी कमाउन सफल बाल गायिका कमलाले अब आफ्नो सपना पनि पुरा गर्न लागेकी हुन्। कमलालाई यो ठाउँ सम्म ल्याउने अमृत सापकोटा हुन्।अमृतकै कारण यो ठाउँ सम्म आएको भन्दै लोक स्वर सम्राट राजु परियारले उनलाई कहिल्यै आफुलाई यो ठाउँमा ल्याउने गुरु अमृतलाई नभुल्न अनुरोध समेत गरेका छन।उनका अनुसार कमला सधै उस्तै चर्चामा रहने गायिका समेत भएको बताएका छन।हेरौ यो बिशेष कुराकनी :
केही सातादेखि फिल्म नगरीमा नायिका बर्षा राउतको श्रीमान संजोग कोइरालासँग सम्बन्धमा खटपट भएको चर्चा चलिरहेको छ । संजोग र बर्षा आफ्नो बैबाहिक सम्बन्ध टुंग्याउने प्रक्रियामा रहेको समेत गसिप हुँदैछ । यस्तैमा नायिका बर्षा राउतले श्रीमान संजोग कोइरालासँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै व्यांग्यत्मक स्टाटस लेखेकी छिन् । ‘हाम्रो हल्लमा, कस्ले के के भने रे, संजोग कोइराला ?’ बर्षाले लेखेकी छिन् । यस्मा संजोगको रिप्लाई छ, ‘को, कहाँ, के, कहाँ तर किन ?’ श्रीमान संजोगसँगका तस्बिरहरु बर्षाले ईन्स्टाग्राममा प्राइभेट गरेपछि उनीहरुबिच सम्बन्ध सुमधुर नरहेको अनुमान गरिएको थियो । पछि पुनः बर्षाले संजोगसँगका तस्बिरहरु पब्लिक गरिन् । फिल्म ‘लाखे’को छायाँकनमा व्यस्त बर्षाले फिल्म वृत्तमा चलेको जस्तो संजोगसँग सम्बन्धमा चिसोपना नआएको बताइन् । लामो प्रेम सम्बन्धपछि बर्षा र संजोग बिहे गरेका हुन् ।
हिमालय टेलिभिजन बाट प्रशारण हुदै आएको गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस किड्स’को उपाधि जेनिश उप्रेतीले जित्न सफल भएका छन् । फाइनल राउण्डमा पुगेका अन्य ७ जना प्रतिष्पर्धी लाई पछि पार्दै जेनिसले उपाधी जितेका हुन् । उपाधिसँगै जेनिशले ‘द भ्वाइस किड्स’को ट्रफी, नगद १५ लाख र विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर जितेका छन् । जेनिश टिम प्रमोदका तर्फ बाट थिए । जेनिशलाई हिमालय टीभीका प्रमुख धर्मराज भुसालले उक्त ट्रफी र चेक प्रदान गरेका थिए । ६ बर्षदेखि १४ बर्षसम्मका बालबालिकाहरुको यस रियालिटी शोमा सहभागि रहेका थिए । यस शो को कोचको रुपमा प्रमोद खरेल, राजु लामा, मिलन नेवार र प्रविशा अधिकारी रहेका थिए ।शुक्रबार र शनिबार बेलुकी ८ बजेबाट यो शो प्रशारण हुँदै आएको थियो । डोटी, ३ माघ- जिल्लामा केही दिन यतादेखि कोभिड–१९ का सङक्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । एकै हप्तामा जिल्लामा ३३ नयाँ सङक्रमित फेला परेक
हार्दिक बधाई लोकदोहोरी गायक प्रकाश पराजुलीलाई पुत्र लाभ
लोकप्रिय गायक प्रकाश पराजुलीलाई पुत्र लाभ भएको छ।यसै बर्ष सम्पन्न पहिलो दोहोरी च्याम्पियनका बिजेता समेत रहेका गायक पराजुलीलाई अर्को खुसि थपिएको हो।स्याङ्जाकि प्रिया अधिकारी संग प्रेम बिबाह गरेका पराजुलीको परिवारमा अर्को खुसि थपिएको हो। लाखौ दर्शकको माया पाएका प्रकाश दोहोरी गीत गाउँन निकै अब्बल गायकको रुपमा हेर्ने गरिन्छ।उनले आवाज दिएका रेकर्डेट गीत देखि लाइभ दोहोरी सम्म सबैजसो सुपरहिट छन।महानायक राजेश हमाल अभिनित दोहोरी गीत मन्जरी एकदम सुपरहिट गीतमा पर्दछ पराजुलीको। प्रकाश र मिना बुढाथोकीले दोहोरी च्याम्पियन जिते संगै नेपाली लोक गीतमा यी जोडीको निकै चर्चा हुने गर्दछ।प्रकाशले आफ्नो परिवारमा नया सदस्य थपिएकोमा खुसि व्यक्त गरेका हुन्।काठमाडौंको ग्रिन सिटि हस्पिटलमा प्रियाको सफल सल्यक्रिया भएको र अहिले बच्चा र आमा दुवै स्वस्थ रहेको पराजुलीले जानकारी दिनु भयो।
चर्चित गायक प्रमोद खरेल महिनामा कति कमाउँछन् ? कति छ उनको सम्पति
नेपाली सुगम संगीत र पप संगीतदेखि पाश्र्व गायनमा प्रमोद खरेलको नाम कुनै नौलो होइन । मबिना कसै कसैलाई, त्यो अंगालोभरिको माया, किन लाग्छ माया जस्ता चर्चित गीत गाएका प्रमोद आफूलाई सादा जीवन जिउने कलाकारका रुपमा चिनाउन चाहनुहुन्छ । उनको स्वरमा महिला फ्यानहरू हुरुक्कै हुन्छन्। प्रमोद स्कुल, कलेजका अब्बल विद्यार्थी हुन्। लजालु स्वभावका उनी विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेर कुनै समय पीएचडी गर्न विदेश जाने सोचमा थिए। त्यसलाई थाती राखी कलेजको लेक्चरर, रेडियो प्रस्तोता हुँदै अहिले पूरै समय गायनमै सक्रिय छन्। २०५६ सालमा आफ्नो पहिलो गीत बजारमा ल्याएका उनले ‘पलपल’ फिल्मको टाइटल गीत गए। त्यसपछि उनको माग बढ्न थाल्यो । फिल्मका मात्रै गीत गाउँदा सीमित घेरामा भएजस्तो लाग्यो उनलाई । त्यसैले अन्य गीतमा पनि आवाज दिए। जब उनको तेस्रो एल्बम ‘मेरो दिल छ पोखरामा’ बजारमा आयो, एकाएक प्रमोदको चर्चा ह
काठमाडौं । चन्दा उठाएर काम पूरा नगरेर बीचमै फरार भएपछि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ । बागमती प्रदेश क्रिकेट संघका कोषाध्यक्ष तथा क्रिकेट राष्ट्रिय प्रशिक्षक अनिल अधिकारीले सीताराम र कुञ्जनाविरुद्ध अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, काठमाडौंमा उजुरी दिएका हुन् । सीताराम र कुञ्जनाले करोडौँ रुपियाँ चन्दावापत संकलन गरेर हिनामिना गरेको भनेर प्रश्न उठेका बेला कारबाहीको मागसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ । रंगशाला निर्माणको कामबाट भागेका सीताराम र कुञ्जनाका दिनदशा बिग्रिएका छन् । चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग उजुरीमा गरिएका छ । उज
जेनिस उप्रेती बने पहिलो भ्वाइस किड्स नेपाल !
काठमाडौं: हिमालय टीभी एचडीबाट प्रशारण भएकोे ‘द भ्वाइस किड्स’कोे पहिलोे सिजनकोे उपाधि जेनिश उप्रेतीले जितेका छन्। शुक्रबार र शनिबार बेलुकी ८ बजेबाट योे शोे प्रशारण हुँदै आएको थियो। हरेक टिमबाट २ जना प्रतिस्पर्धीले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुगेका ८ जनामध्येबाट टिम प्रमोदबाट अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुगेका जेनिशले जितेका हुन् । यो फ्रेन्चाइजी शो नेपालमा केही वर्ष अगाडि नै आएको हो । द भ्वाइस अफ नेपालको सिनियर तर्फ यसअघि नै ३ सिजन पूरा भइसकेको छ । तर, १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको लागि बनाइएको बालबालिका संस्करण ‘द भ्वाइस किड्स नेपाल’को यो पहिलो सिजन थियो । डिजिटल अडिशनमा सहभागी २० हजारमध्ये एक सय जना ब्लाइन्ड अडिसनमा सहभागी भए । ब्लाइन्ड राउण्डबाट प्रत्येक टिममा १२ जनाका दरले ४८ जना छानिए। त्यसबाट लाइभका लागि २४ जना छानिए। अनि अन्तिम १६ हुँदै ८ जना फाइनलमा पुगेका थि
काठमाडौँ । पर्यटकीय नगरी पोखराको लेकसाइड फेवा तालको छेउमा नेपालमै पहीलो पटक गोल्ड म्यान भेटीएका छन ओखल ढुङ्गा घर भएका अङकीत साही को कहानी पिडा दाई छ केही बर्ष भारतमा दीन भरी स्ट्याचु बनेर काम गरेका उनलाई यो काम नेपालमै गरौ भन्ने लागेर पोखरा आएको उनले बताए । घण्टौ आफु नचल्बली उभिइरहने उनलाई पोखरा घुम्न आएका पर्यटकहरु फोटो खिच्छन र जान्छन कसैलाई उनि मानीस हुन भन्ने थाहा हुदैन र भयो भने सबै अच्मीत हुने गर्दछन, फेवाताको छेउमा ११ बजे देखी ५ बजे सम्म उनि कतै हलचल नगरी कीन बस्छन। यो देख्दा हामी पनि अचम्मीत भयौ र उनि संगै कुरा कानि गर्न तर्फ लाग्यौ सम्भवत नेपालमै पहीलो पटक ५ । ६ घण्टा कतै नगइकन हल चल नगरीकन र स्ट्याचु बनेर बस्ने यो नै पोखराका पहीलो गोल्ड म्यान होलान, हामीले अन्य देशमा यस्तो गरी बस्ने र आयआर्जन गर्ने गरेको प्रसस्त देखेका छौ तर पोखरामा चाही यो पहीलो हो हामीले उनै अंकीत साही सं